Mediafire Upload မရတော့လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
Intro Myself 862
Printers & Scanner 31
Mediafire Upload မရတော့လို့ပါ
PhyoMyanmar January 2012 edited January 2012 in Internet & Email အကိုတို့ အားကိုးပါတယ်ဗျာ ... ကျွန်တော် နည်းပညာ ဘလော့လေးရေးနေပါတယ် ။အဲဒီအတွက် Software လေးတွေကို Mediafire ကနေပဲတင်ပါတယ် ။အရင်တုန်းက သီချင်းတွေ ဖိုင်တွေ တင်ရင် နောက်ဆုံးဗျာ ကွန်မကောင်းရင်ကြာတာပဲရှိပါတယ် ။အခုတော့ ကွန်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း တင်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ် ။File ဆိုဒ်ကြီးကြီးသေးသေးတင်လိုက်ရင် 9% , 12% လောက်မှာ Failure ဆိုပြီးဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ် သူ့ Error ကိုကြည့်လိုက်တော့ Connection or Permission Error -502 ဆိုပြီးပြနေပါတယ် ။အရင်ရပြီး ဘာလို့နောက်မှ ရုတ်တရက်ဖြစ်ရလဲမသိတော့ပါ ။ ကယ်ကြပါဦးWimax 128 ကိုတစ်ယောက်ထဲသုံးတာပါ ။ ကွန်ကောင်းလဲမရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ။Ultrasurf နဲ့တောင် ရ၀ူးးးးးးးးးးး ( Account အသစ်ဖွင့်ပြီးလုပ်တာတောင်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ ) မှတ်ချက်များ
PhyoMyanmar January 2012 Registered Users ဘယ်လိုတင်တင်မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဟူးးးးး:( waiphyo1986 February 2012 Registered Users Do you compress file. file type "rar" or "zip" and uploading your data. PhyoMyanmar February 2012 Registered Users Yes ... I compress to "rar' not only rar but also .mp3 type ... Now ... I can't anything to upload :( ( poor)can u upload at Mediafire ????( today , i can't upload at My Teacher Center .. with Skynet )So What' up ... :( I can't find the reason ( sorry for poor English ) ancestor February 2012 Registered Users The same thing happens to me. What's up? tayzarlin February 2012 edited February 2012 Registered Users I always use with cdma 800 internet.I can upload with ultrasurf or proxy number(work me).upload speed is 512 - 1mbps range. ancestor February 2012 Registered Users စမ်းကြည့်အုံးမယ် PhyoMyanmar February 2012 Registered Users I also try with Ultrasurf ... It happen " restart Ultrasurf " while loading is 19% arround:( poor me :'( Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla